UKevin Bacon Uthi Uzocabanga Ukubuyela Ku-'Lwesihlanu Lweshumi Nantathu 'Movie
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo UKevin Bacon Uthi Uzocabanga Ukubuyela Ku-'Lwesihlanu Lweshumi Nantathu 'Movie
by UTimothy Rawles June 18, 2020
ebhalwe ngu UTimothy Rawles June 18, 2020
Ikhaya likaKevin Bacon elidlule neleholide liyamhlupha yena nomndeni wakhe kule movie entsha esabisayo Bekufanele Ushiye. Le filimu izotholakala On Demand, Juni 19.
Muva nje iHorror ithole ithuba lokukhuluma nezinkanyezi nomqondisi wefilimu futhi bekukhona izinto ezithile ezithokozisayo ezixoxwe yiwo wonke umuntu, kufaka phakathi ukuthi ngabe iBacon ingake icabange ukubuya ngamandla athile NgoLwesihlanu 13th enye inkondlo elama noma qala kabusha. Noma yimuphi umlandeli woqobo uyazi ukuthi ushonela endaweni ekhumbulekayo kepha bekungaba kuhle kanjani uma ebuya njengomunye umlingiswa? Impendulo yakhe yamangaza.
Kodwa okokuqala, sikhulume no-Amanda Seyfried ngendima ayidlalile kule filimu. Udlala uSusanna, ongumlingisi nomama olwela ukugcina ukuntanta emshadweni wakhe ocwilayo. U-Amanda wadonsela ugqozi kumlingiswa wakhe kule movie kusuka empilweni yakhe yangempela njengomlingisi. “Ngikufundela lokho esikrinini ngendlela engikwenza ngayo empilweni yami, cishe kuze kube seqophelweni eliyingozi… bekufana nokuhlangana nempilo yami. Umsizi wami ngaleso sikhathi wayedlala i-PA yami ku-movie. Bekumnandi, kumnandi. ”
U-Amanda Seyfried ku- "Kufanele Ube Ushiye (2020)
Ubuye waxoxa ngokusebenza nomqondisi nombhali wefilimu uDavid Koepp, emchaza njengomuntu okhaliphile. “Bengikuthanda nje ukuba nezingxoxo naye ngomshado nokuba ngumzali nokunye. Kuyindlela yokwelapha kimi, ngokuvamile, ukuba phakathi kwabantu abanokuqonda okunjalo. ”
USeyfried wayenokuqonda okuthile ngokuqondiswa ngumuntu obhale ne-screenplay. “Uma umqondisi nomlobi benamaqoqo, nakanjani aqinile kakhulu futhi kwesinye isikhathi asebenza ngasikhathi sinye, kodwa kufana nokuthi unakho konke okudingayo kumuntu oyedwa. Kukhona ocebile enjaloomkhulu imininingwane eningi evela kothile futhi bayakwazi ukuveza ukuthi bazama ukuthini. ”
"Ukungasho ukuthi abaqondisi abakwazi ukuthatha okubhaliwe bese bedala umhlaba abafuna ukuwudala," esho enezela ngokuthi ukuba nalolo hlobo lwamandla asethiwe kusho ukuthi inhloso yesigcawu ichazwe ngqo kumlingisi, kungaba ngqo. “Futhi I kanjalo. Abanye abantu abayithandi, abanye abalingisi bafuna ukuba nenkululeko. Kepha Nkulunkulu, ngifake ebhokisini bese ngidizayina lelo bhokisi. Hhayi ukusho ukuthi anginakho ukufaka kwami ​​ubuciko kwesinye isikhathi, kepha ngifuna ukunikeza abakufunayo. ”
Leyo syciosis yayilahlekile ku-Amanda's 2009 Umzimba kaJennifer. UDiablo Cody ubhale le movie kwathi uKaryn Kusama wayiqondisa. Sibuze u-Amanda ukuthi bazwana kanjani.
"Babekhuluma ulimi olufanayo.," Kukhumbula u-Amanda. “Futhi uDiablo wayemethemba ngokuphelele uKaryn. Angikhumbuli— futhi kwakudala kakhulu kudala — kodwa angikhumbuli beba nokungaboni ngaso linye nganoma yini olwazini lwami. Lokhu kungenye yezinto ezingajwayelekile lapho ayishaya ngayo ekhanda. Ngicabanga ukuthi uKaryn wenza i-movie engenaphutha. ”
UKevin Bacon Kuwe Kufanele Ube Nesobunxele (2020)
Ukudayela iwashi emuva kakhulu ku-1980, ngibuze uKevin Bacon ukuthi uthini ngamabhayisikobho asabisayo, ubekade enza izindima ezithile ezivela kumeluleki wekamu e NgoLwesihlanu 13th kumzingeli osebenza ngesandla ophenduke isilo esikhulu Ukuthuthumela, kuze kube manje indoda ehlala endlini ene-amorphous floorplan.
"Ngikhangwa kakhulu ngabalingiswa ngaphezu kwalokhu engikuthandayo kulo hlobo lohlobo," esho ngemuva kokuba ngimbuzile ukuthi uyoke abuye yini ukuthola i-a NgoLwesihlanu 13th qala kabusha endimeni ye-cameo. “Uma kunomlingisi omkhulu kumdlalo wamahlaya noma kwezothando noma kumabhayisikobho asabekayo noma kumdlalo wokulingisa noma emdlalweni, uyazi ukuthi yilokho engifuna ukukwenza — vele ube ngumlingisi. Ngakho-ke yingakho ngigcine ngishaqekile izikhathi ezimbalwa ezihlukile ngoba iveza, uyazi, izinhlobo ezinhle kakhulu zezinselelo zokwenza. Kunezinto ezithinta imizwa futhi uzama ukulinganisa amazinga ahlukene okwesaba ngoba uyazi ukuthi uzokwesaba nge-movie ethusayo uma ungumlingisi oholayo ngakho-ke lezo yizinselelo zokulingisa engizithandayo. ”
Lo mlingisi oneminyaka engama-61 uthi uthanda ukwethuka ngokwengqondo nangokomzwelo kunamabhayisikobho angama-slasher futhi athathe indima njengoJack ongenalutho koqobo NgoLwesihlanu 13th kwenziwa ngaphandle kwesidingo.
“Bengingenile ULwesihlanu i-13Th, hhayi ngoba bengifana nokuthi ngiyazithanda lezi zinhlobo zama-movie, bengingumlingisi ongasebenzi, ”uyakhumbula. “Bengiseyeshashalazi futhi ngizama ukukhokha irenti, bengidinga igig niyazi. Futhi-ke kwaba yilolu hlobo lwesimo sohlobo. Kepha ama-movie asabekayo engikhulele kuwo abekhona The Shining futhi I-Exorcist futhi Ingane kaRosemary futhi Ungabheki Manje— Lezo zinhlobo zama-movie yizo engikhanga kakhulu kuzo. ”
Ukucacisa nje, ngambuza futhi ukuthi ngabe angaze abuyele eCamp Crystal Lake ngesikhundla esithile uma ethulwa kuye.
"Impela into efanayo njengoba ngishilo uyazi ukuthi kuzofanele kube ngumlingiswa ovelele," ephinda. “Ngiqonde ukuthi bangicele ukuthi ngibe ku Footloose ngiqale kabusha futhi ngangifana 'nesiqiniseko sokuthi ngiyayivula,' kodwa ingxenye yayingeyinhle kangako ngakho angikwenzanga. ”
Akungabazeki ngekhono likaDavid Koepp lokubhala ama-personas amahle. Uguqule ezinye zezinhlamvu ezikhumbuleka kakhulu kwi-cinema ngokusebenzisa ama-screenplays futhi wazenzela okwakhe ngemisebenzi yoqobo. Kusuka ku- Ukufa Kuba Yakhe kuya Igumbi Lokwethuka, UKoepp uyimboni. Imidlalo yakhe yesikrini ifaka futhi Jurassic Park futhi War of the Worlds inkanyezi uTom Cruise.
Kufanele Ube Ngakwesobunxele (2020)
Bekufanele Ushiye akukhona ukusebenzisana kwakhe kokuqala noKevin Bacon. Laba bobabili baphinde basebenza ndawonye komunye umxhwele ongaphezu kwemvelo Hlanganisa ama-Echoes.
I-movie isuselwa enoveli kaDaniel Kehlmann futhi ilandela umndeni ohleli eWales ohlala endaweni yesikhashana endlini eqashiwe eqashiwe okungeyona into ebonakalayo. Lokho futhi kungachaza abanye babalingiswa.
UKoepp uthi lapho kuguqulwa umdlalo wesikrini kusuka emsebenzini obhaliwe izehlakalo ezisencwadini ngeke zihlale zidluliselwa kwifilimu, izindaba zitshelwa ngendlela ehlukile. “Incwadi eningi isekhanda lomuntu futhi i-movie iyizinto abazisho nabazenzayo. Ngakho-ke ufuna izinhlamvu ongaziqonda, izinhlamvu ongaziqonda futhi ezidwetshwe kahle. Ufuna indawo ezokondla ingqondo yakho. ”
Kulokhu, uKoepp wacabanga Bekufanele Ushiye kwakuyisisekelo esihle kakhulu. Ubashiye kahle abalingiswa bebodwa kususa ama-tweaks amancane angabalulekile. “Isakhiwo se-movie ngaso sonke isikhathi sizohluka kwesakhiwo sencwadi. Angifuni kangako ngesakhiwo, ngifuna abalingiswa nesisekelo. ”
Ngemisebenzi efana ne- Ukufa Kuba Yakhe futhi Jurassic Park, Ngibuze ukuthi ngabe Bekufanele Ushiye kungathathwa njengenganekwane yokuxwayisa.
“Ngicabanga ukuthi ubungakwazi, akuyona into yokuqala efika emqondweni wami, kodwa uyazi ukuthi kunesisho esidala esithi 'kungenzeka wagcina ngokudlula, kepha okwedlule akukapheli ngawe,' futhi ngicabanga ukuthi kukhona ubungozi bokungazazi kahle njengoba kufanele noma wenze sengathi awuzazi kahle njengoba kufanele, ”kusho yena. “Bobabili abalingiswa bakaKevin no-Amanda banezimfihlo nezici zobuntu babo abafuna ukuzifihla futhi asiqiniseki ukuthi sizizwa kanjani ngabo. Kunombuzo othile; unecala lokubi, unecala yini elibi? Ngabe bobabili? Lapho abantu bengaqondile phakathi, kuba nenkinga ekugcineni. ”
Le movie iphrojekthi yephrofayili ephezulu enethalente lohlu olungu-A kusuka kuzo zonke izindlela. Ngaphezu kwalokho, uma ubucabanga ukuthi bekufanele kube ukukhishwa kweshashalazi uqinisile. Kodwa-ke, i-coronavirus ifaka wonke umuntu ku-quarentine cishe ngemuva nje kokuba isongwe.
"I-movie yonke yenziwe ngoFebhuwari walo nyaka futhi sasidingida izinhlelo zokukhishwa ngaleso sikhathi," uyakhumbula. “Besibhekene nokwejwayelekile, thina njengebhayisikobho encane silwa kanjani nalaba behemoth abanyathela ama-multiplexes futhi basikhiphele isikhala esincane lapho abantu bengase babe nethuba lokusithola bese konke kuvalwa. Kwakusemasontweni ambalwa uJason Blum futhi ngasebenza ngasikhathi sinye ngathi 'Hheyi, le movie idinga ukuphuma manje-ish.' Wonke umuntu ubambekile ekhaya; le movie imayelana nokuba sendlini ongeke uphume kuyo. ”
Uyavuma ukuthi amabhayisikobho amakhulu abekelwe isabelomali ajikeleza umgwaqo, alinde imvume yokungena ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini ngemuva kokuba ubhadane seluqalile. “Ubabona bexhuzula phansi i-calender bese bemunca wonke umoya-mpilo futhi kunokuba bahlale phansi balinde ukuminyana phambi kwabo sicabange ukuthi kungani singakwazi ukuqhubeka nokubuka ama-movie ekhaya? Futhi ngicabanga ukuthi i-Universal iholele indlela kulokhu futhi ngiyazi ukuthi ibangele imizwa ethile ebuhlungu nabanikazi beshashalazi kodwa ngicabanga ukuthi kuhle futhi kuyadingeka. Akekho ofuna ukuthatha indawo ye-cinema-going, sonke asikwazi ukulinda ukubuyela kuma-movie angithi? Kepha kungani singakwazi ukuqhubeka nokuthola izindlela ezintsha zokuletha ama-movie kubantu ngendlela ejabulisa kakhulu? ”
Ngokwesiko, abaseshashalazini babona imuvi ngempelasonto bese bekhuluma ngayo nabangani ngoMsombuluko.
UKoepp uthi manje, nge-On Demand, "Leyo ngxoxo izwa sengathi ingaqala futhi."
Bekufanele Ushiye ozolingisa uKevin Bacon no-Amanda Seyfried bazotholakala On Demand everywherngoJuni 19.
Amanda SeyfriedUDavid KoeppUJason BlumKevin BaconBekufanele Ushiye
Inyanga Yokuziqhenya Esabekayo: Umbhali / Umqondisi uChris Moore
I-Leatherface Gender-Swapped Anime Collectible Ekugcineni Lapha